Oke Osimiri Caribbean: njirimara, ọdịdị ala na usoro | Netwọk Mgbasa Ozi
Otu n'ime ebe ndị a kacha mara amara n'ụwa bụ Oké Osimiri Caribbean. Aha a sitere na ndị Caribbean. Ọ bụ ụmụ amaala bi na mpaghara nke Antilles Ndị pere mpe na South America. Oke Osimiri Caribbean nwere oke mmiri na mmiri ọkụ na-enye ọmarịcha ịma mma. N'ihi ịma mma a, ọ bụ ihe nde mmadụ na nde ndị njem nleta na-elekwasị anya n'afọ niile.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara gị niile, ọdịdị ala gị na ntọala nke Oke Osimiri Caribbean.
2 Oke Osimiri Caribbean
3 Nhazi nke Oke Osimiri Caribbean
Ọ bụ ụdị mmiri a na-akpụ site na Osimiri suboceanic ma bụrụ nke Atlantic Ocean. A na-ahụ mpaghara ebe okpomọkụ, ya mere ọ nwere ọkachasị mmiri ọkụ. Mmiri ndị a nwere ọla ocha nke mere ka ha nweta mma na-enweghị atụ. Ọ bụrụ na nke a, anyị na-agbakwunye na ahịhịa, ahịhịa na osisi dị n'akụkụ ya nwekwara nnukwu ụba, ọ na-eme ka ebe a bụrụ paradaịs n'ezie.
Anyị na-ekwu maka nnukwu mmiri nnu dị n'akụkụ ndịda ọwụwa anyanwụ nke Ọwara Oké Osimiri Mexico na ọdịda anyanwụ nke Atlantic Ocean, n'etiti latitude 9 between na 22º North na longitude 89º na 60º West. N'etiti oke oke osimiri a, anyị na-achọta ọtụtụ akụkụ. N'otu aka, ọ ga - ejedebe na ndịda ya na Colombia, Venezuela na Panama. Banyere ọdịda anyanwụ, ọ dị nso na Costa Rica, Nicaragua, Mexico, Honduras na Belize. Ọ bụrụ na anyị agaa n'ihu ugwu anyị ga-ahụ na ya na Cuba, Jamaica, Dominican Republic na Puerto Rico n'akụkụ ugwu ya.
Oke Osimiri Caribbean bụ ebe sara mbara nke nwere agba mmiri na-acha anụnụ anụnụ na obere ebili mmiri. Kacha nkịtị ihe bụ na na nkezi omimi bụ gburugburu 2.200 mita. Ebe kacha mie emi n’oké osimiri a bụ Cayman Trench, nke na-edebanye aha mita 7,686 n’okpuru oke osimiri. Ọ bụrụ na anyị agbasaa echiche ahụ na mpaghara niile nke Oke Osimiri Caribbean na-ekpuchi, anyị ga-ahụ na ọ bụ ebe obibi karịa agwaetiti 7.000, obere agwaetiti na ugwu. Ọtụtụ n’ime ebe ndị a pere ezigbo mpe nke na ndị mmadụ agaghị ebi na ha.
E guzobela mpaghara Caribbean niile na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ebe ọ bụ na 2015 ka e guzobere na oké osimiri a Ọ na-abịa ịsa ahụ n'ụsọ osimiri nke mba 12 na mpaghara agwaetiti 22. A maara mpaghara a dum taa site na aha mpaghara Caribbean. N'ime agwaetiti niile, Cuba bụ nke kachasị mgbe Anguilla bụ obere.
Oke Osimiri Caribbean
Ọ bụrụ na anyị gụkọta ngụkọta nke Oke Osimiri Caribbean, anyị na-ahụ mpaghara nke square kilomita 2.7. Elu mmiri a mere ka ọ bụrụ otu n’ime nnukwu osimiri ndị dị n’ụwa. Ikwesiri ima otu esi amata ọdịiche dị n’etiti oke osimiri na oke osimiri. Oké osimiri na-ebute elu ala pere mpe. Ya mere, a na-ahụta nke a otu n'ime ndị kachasị ibu n'ụwa.
N'ime anụ ahụ ya, kemịkalụ ya na n'ibu ya anyị hụrụ na ọ bụ oke osimiri dị egwu. Salinity ya adịchaghị elu mana ọnọdụ okpomọkụ ya dị elu nke ukwuu. Ha nwere ụkpụrụ nnu nnu nnu nke 3.6%, ebe ọnọdụ okpomọkụ ya dị ogo 27 ma ọ naghị agbanwekarị karịa ogo 3 n'ime afọ. N’oge udu mmiri, etinyere ụkpụrụ salinity dị elu. Nke a bụ n'ihi na okpomọkụ na-ada na mmiri na-enye ohere obere solubility. Nke a bụ ihe mere ịta nnu ji abawanye. Kama nke ahụ, oge na-amalite site na June rue Disemba, n'oge a bụ nke nwere nnu dị ntakịrị.
Otu ọghọm dị n’oké osimiri a bụ na ajọ ifufe na-efekarị ya. Ọ bụ ezie na ọ nwere ịma mma na-enweghị ike ịkọwapụta maka mmiri doro anya doro anya ya na njupụta nke ọtụtụ ihe dịgasị iche iche, a naghị azọpụta ya na oke ifufe. N'ịnọ na mpaghara ebe okpomọkụ, ọ na-enwekarị nsogbu ka ukwuu na mgbanwe ọnọdụ okpomọkụ na n'ihu. Ná nkezi, a na-enwe oké ifufe 9 nke ebe okpomọkụ na-emetụta Oke Osimiri Caribbean na nke ahụ nwere ike ịghọ oke ifufe. Ọ bụghị oké mmiri ozuzo niile na-aghọ ajọ ifufe, mana n'ihi mgbanwe ihu igwe, ihe puru omume a na-abawanye ruo ọtụtụ afọ. Ọ bụghị naanị na ihe puru omume nke oke ifufe na-abawanye, mana yana ike ya.
Nhazi nke Oke Osimiri Caribbean
Ugbu a, mmiri a dị na efere Caribbean. Efere tectonic a bụ nke dị na mbadamba efere North America na South America, efere Nazca na efere Cocos. Ndị ọkà mmụta sayensị enyochaala isi mmalite osimiri a wee chọpụta na a na-eche na ọ dị nde 180 nde. Ọ bụ n'ihi oge Devonian ka e nwee nnukwu efere nke a kpọrọ Protocaribe. Ọ bụ ebe a ka oke osimiri a malitere n'ihi nkewa nke mba kachasị na-achị ụwa n'oge ahụ aha ya bụ Pangea.
N'ihi na Pangea kewara abụọ n'akụkụ aha Laurasia na Gondwana, na Mgbagharị kọntinent malitere ime ihe. Site na mmegharị ahụ ọ nwalere na ịchekwa ugwu na ụzọ ya na Laurasia na Oge Carboniferous E mere ka oké osimiri ahụ belata. Otú ọ dị, mgbe e mesịrị, n'oge Oge Triassic, ndị ala ahụ malitere ịta ahụhụ na mgbawa ndị jisiri ike imeghe ala ọhụrụ. Ọ dịlarị na Oge Jurassic ebe Osimiri Mexico malitere itolite dika o siri puta taa. Ihe mgbochi ndị ọzọ pụtara n'oge oge Jurassic ma jupụta efere mmiri dị n'akụkụ ndịda.
Ruo ọtụtụ nde afọ, Oke Osimiri Caribbean na-eme ka mmiri ya dịkwuo elu Ugbala enwetara udi nke taa. Nke a mere afọ 85 gara aga. N'ihi mmegharị nke tectonics efere, otu akụkụ nke oke osimiri, n'etiti 8 na 21 kilomita, kwagara Caribbean Basin. Ọbụna taa, eriri mmiri a dị n'oké osimiri ka dị n'elu mmiri.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmatakwu banyere Oke Osimiri Caribbean na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Oké Osimiri Caribbean